Ny sisin'ny Galaxy S7 sy S7 dia nahazo fanavaozana ny fiarovana ny volana martsa | Androidsis
Manuel Ramirez | | Samsung, fiarovana
izahay efa ho 4 taona taorian'ny nanombohan'ny Galaxy S7 sy S7 Edge ary mbola mahazo hatrany ny fanavaozana ny fiarovana rehetra ilaina amin'ny telefaona izy ireo. Na dia mety hiova aza ny zava-drehetra amin'ny volana ambony, satria hiditra amin'ny taona fahadimy isika ary efa misy pirinty kely.
Nahazo ireto telefaona Samsung roa ireto ny fanavaozana Android lehibe farany farany misy ny kinova 8.0 izay nantsoina hoe Oreo. S7 sasany izay ampahany, indrindra ny sisin'ny fiteny famolavolana vaovao misy sisiny miolaka ary mbola hitantsika hatrany amin'ny faran'ny Samsung.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny Mbola mitohy ny fandefasana azy amin'ny fomba goavambe Koreana Tatsimo fanavaozana ny fiarovana, saingy araka ny efa nolazainay, mety hiova ny manomboka amin'ity volana ity, satria hiditra amin'ny taona fahadimy fanavaozana isika.
Ireo dia kendrena amin'ny famoahana vaovao farany fotsiny rehefa manakiana. Izany hoe tsy ho hitantsika intsony ireo fanavaozana tsindraindray, fa fa kosa manokana izay hisorohana ny fametrahana ny fiarovana ny telefaona, ary miaraka amin'izay ny an'ny mpampiasa mampiasa azy.
Raha ny marina, ny roa S7 sy S7 Edge dia nahazo ny fiarovana tamin'ny volana martsa hametraka azy ireo mitovy amin'ny ambin'ny ambaratonga ambony amin'ny orinasa Koreana. Ny torolàlana Samsung momba ny telefaona findainy dia mandeha ho an'ny 3 taona nahazo fanavaozana ny fiarovana, fahefatra misy fanavaozana isaky ny telo volana ary fahadimy miaraka amin'ireo mpitsikera ary tena ilaina.
Raha manana iray amin'ireo telefaona ireo ianao dia aza mangataka andro raha manamarina raha efa manana ny fanavaozana avy amin'ny toerana napetrany ianao. Sa afaka isika mitadiava rindrambaiko S7 sy S7 sisiny ao amin'ny trano fitahirizana, ary matetika izy ireo no toerana tsara indrindra hanavaozana ny telefaona alohan'ny fananana faharetana masina hahatratra azy ireo ny OTA.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy S7 sy S7 Edge dia manohy mandray fanavaozana ny fiarovana
S7Died dia hoy izy:
Tena tsara! Ity no lahatsoratra voalohany hitako momba ny fanavaozana farany. Hita fa nametraka azy io aho omaly ary androany dia maty tampoka tsy toy ny teo aloha ny telefaona.
Diso fanantenana aho .. Ananako hatramin'ny 2017, niezaka nanao reboot isan-karazany aho (reboot normal, terena amin'ny volume down, terena amin'ny volume up, samy manana ny bokotra antrano fa tsy misy…). Nifandray tamin'ny Samsung Custom Care aho ary tsy afaka manao na inona na inona izy ireo noho ny antony Covid19 tsy misy fanampiana.
Mazava ihany koa aho fa rehefa apetrako azy io dia tsy miakatra izany (ny jiro mena mitarika tsy maivana koa) .Fehiny, maty tanteraka izy io.
Azafady, raha sendra olona iray no niseho ka afaka namaha azy ireo dia tiako ny fanampiana.
Ahoana ny fanovana ny famahana ny efijery Android anao